Tuesday October 01, 2019 - 19:56:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska Ciidamada Maraykanka Afrika ee loo yaqaano AFRICOM waxaa saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxayay warsaxaafadeedyo kala duwan kuwaas oo ku saabsan weerarkii xooganaa ee ciidamada Al-Shabaab ay ku qaadeen Saldhigga milatari ee Ballidoogle.
Weerarka oo ku billawday gaadiid walxaha qarxa ay ku raranyihiin oo lala beegsaday saldhigga waxaa xigay ciidamo hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dagaal adag saldhigga gudihiisa kula galay ciidamadii Maraykanka ahaa ee halkaas lagu weeraray.
Gaadiidka qaraxyadu ku rarnaayeen iyo dagaalka tooska ah ayaa si gaar ah u beegsaday qaybta ay ciidamada Maraykanku ka deganyihiin Ballidoogle oo sidoo kale ay qaybo kamid ah ka deganyihiin ciidamo Yugaandhays ah, Maleeshiyaat Soomaali ah iyo shisheeye kale oo kala gadisan.
Markii uu soo baxay warka ah in Ballidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee ay Ciidamada Maraykanku ka deganyihiin Soomaaliya uu weerar xooggan ku socdo, warbaahintuna ay aad ah uga warramaysay weerarkaasi ayaa waxaa durbadiiba bilowday hadallo iyo warsaxaafadeedyo isburinaya kuwaas oo kasoo baxayay taliska AFRICOM ee mas'uulka ka ah ciidamadaas la weeraray.
AFRICOM ayaa ugu horreyntii xaqiijisay in Ballidoogle uu weerar ka dhacay isla markaana ay dib kasoo sheegi doonaan faahfaahinta sida ay u wax uga dheceen xerada kadib marka ay soo xaqiijiyaan.
Muddo shan saacadood ah kadib ayay AFRICOM waxaa ay soo saartay hadal labaad oo ay ku faah faahisay weerarkii Ballidoogle. Waxay sheegtay in weerarka la isaga caabiyay islamarkaana aysan jirin wax khasaare ah oo ciidamadooda iyo kuwa kale ee ay saaxiibada yihiin kasoo gaaray weerarkaasi.
AFRICOM waxaa ay intaas ku dartay in raggii soo weeraray ay 10 dagaalyahan ka dileen, laba duqeeyn oo ay geysteenna ay ku gubeen mid kamid ah gaadiidkii qaraxyadu ku rakibnaayeen ee weerarka kusoo qaaday.
Intaas kadib waxaa muddo 24 saacadood ay kasoo wareegtay weerarkii Ballidoogle mar saddexaad hadal intii hore oo dhan ka gadisan ayuu soo saaray taliska AFRICOM. Waxaa ay markaan sheegeen in askari kamid ah ciidamadooda uu ku dhaawacmay weerarka, hadalkaas oo beeninaya hadalkii hore ee ahaa inaan wax khasaare ah habayaraatee uusan soo gaarin ciidamadii Ballidoogle ku sugnaa.
Sidoo kale waxay markaan sheegeen in ay hal duqayn oo kaliya fuliyeen intii uu weerarku socday, taas oo iyaduna khilaafsan hadalkii ahaa in ay laba duqayn fuliyeen.
Hadalladan is khilaafsan ee kasoo baxay AFRICOM ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisanyahay culayska ciidamadooda ku qabsaday saldhigga Ballidoogle iyo jahwareerka ku dhacay saraakiisha hogaamisa ciidamadaas.
War saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska warfaafinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in 121 askari oo Maraykan ah lagu dilay weerarkii Ballidoogle. Khasaaraha ugu badan ayaa waxaa gaystay 2 gaari oo walxaha qarxa ay ka buuxeen, kuwaas oo ku qarxay bartamaha saldhigga.
Muuqaal lasoo dhigay baraha internetka ayaa muujinayay gaari sadexaad oo ay diyaaradaha Maraykanku gantaal ku dhufanayaan. Gaarigaas ayaa sida ay xogo aan helnay xaqiijinayaan ahaa midkii ay xerada ku yimaadeen ee ay ka degeen ciidamadii Inqimaasiyiinta ee gudaha u galay saldhigga Ballidoogle, Kadibna ay diyaaradu duqaysay isagoo aanay cidina saarnayn, kuna baakiman waddo dhisme uu ka socdo oo ku taalla gudaha xerada.
Waa werarkii ugu cuslaa uguna khasaaraha badanaa taariikhda ee ciidamada Maraykanka ah ku qabsada gudaha Soomaaliya.